Daraasad Ka Digtay Dhamaanshaha Noolasha Sanadka 2050..Sabab? | Xaqiiqonews
Daraasad Ka Digtay Dhamaanshaha Noolasha Sanadka 2050..Sabab?
Daraasad Cilmiyeed ayaa ka digtay in noolasha aadanaha ay dhamaan doonto 2050 , taasi oo ka dhigan in insaanka uu ku dhamaan doono 30 sanadood gudahood.
Daraasad ayaa tibaaxday in sababta ugu weyn ee keeni karta dhamaanshaha noolasha ay tahay “Isbadalka Cimilada”. arinkaasi oo sababi kara in nolasha si dhaqso ah u soo dhamaato-sida ay hadalka u dhigeen.
Daraasadda oo lagu baahiyey jariidada “the Sun” ee ingiriiska ka soo baxda ayaa waxaa ciwaan looga dhigay “Khataraha amni ee ku xeeran jiritaanka Cimilada”.
Culimo Sheegay In Soo Ogaadeen Furuha Looga Fogaado Cimri Dega Dega
Daraasada ay isticmaashay erayadan “Isbadalka Cimilada waxa uu halis ku yahay jiritaanka xadaaradda insaanka” iyagoo sheegay in isbadalka Cimilada uu halis weyn ku yahay noolasha ka jirta meeraha Dhulka.
Baarayaasha ayaa waxa ay leeyihiin “waxaa la filan karaa in heerka biyaha uu kor uga soo kaca oogada badda qiyaastii 0.5 mitir, sidoo kale waxaa la filanayaa in 55% dadka dagan dhulka ay la kulmi doonaan kuleel aad u daran in ka badan 20 maalmood/sanad walbo, arinkaasi oo khatar gelinaya sii jiritaanka noolasha”.